Boeny: misokatra ny taom-pamarotana lojy | NewsMada
Boeny: misokatra ny taom-pamarotana lojy
Na eo aza ny tranga Covid-19 sy ny hamehana ara-pahasalamana, mitohy ny fampihodinana ny toekarena any amin’ny faritra Boeny. Nilaza ny lehiben’ny faritra, mpisolo toerana, i Bazezy V. Clavelah, fa nisokatra, nanomboka omaly 18 mey, ny taom-pamarotana, ny fividianana, ny fanangonana ary ny fanondranana any ivelany ny vokatra lojy mainty maso (black eyes) any amin’ny faritra Boeny, amin’ity taona 2020 ity.
Maro ny karazana lojy, fa ny lojy mainty maso no tena tsara kalitao sady ankafizin’ny mpanjifa, indrindra ny any ivelany. Tena mamokatra azy ny any Boeny.
Ahitana mpisehatra maro ao anatin’ny lalam-pihariana lojy. Miainga any amin’ny mpamboly, ny mpivarotra masomboly sy ny fanafody ary ny zezika, ny mpanangom-bokatra sy ny mpivarotra, ny mpanao ny sivana, ary mandalo any amin’ny mpanondrana any ivelany.
Nihena ny vokatra
Nohamafisin’ny lehiben’ny faritra, mpisolo toerana fa tsy maintsy manaja ny hamehana ara-pahasalamana ireo mpisehatra rehetra voalaza ireo. Nanotrona azy nandritra ity fanambarana ny taom-pamarotana sy fividianana lojy ity ireo mpiara-miombon’antoka ara-bola sy ara-teknika rehetra.
Tsiahivina fa nihena ho 16.000 t ny lojy vokatra ho an’ny taom-pamokarana 2018 raha toa ka efa nahatratra 24.000 t, ny taona 2017. Anisan’ny antony ny haratsian’ny masomboly sy ny tsy fifehezan’ny mpamboly tsara ny teknikam-pambolena.